Umlawuli Swiss liphuhlise iimfuneko ICO - Blockchain News
EyoMdumba 19, 2018 admin
Umlawuli Swiss liphuhlise iimfuneko ICO
Ngokuphathelele ne okwanda inani leeprojekthi ICO eSwitzerland ngoFebruwari 16, 2018, Service Swiss Financial Market Supervision FINMA siseko ashicilelwe ukongeza uguqulelo sangaphambili ICO Handbook, ishicilelwe ku September 2017.
Ngokutsho uxwebhu, uvavanyo ukuthotyelwa ICO kunye neemfuno umthetho phezu ummiselo lweemarike zezimali, ingakumbi Anti-Money lokuxhaphaza Act (Amla), kufuneka lwenziwe kwi kwimeko-by-case nesisekelo.
Ekuhlaziyeni ICO, esisebenza mali iya kuthathela ingqalelo imisebenzi wemiqondiso kunye nesakhono norhwebelwano okanye ukudlulisela kubo. FINMA wachaza amaqela amathathu zeziliphu:
kubudlelwane intlawulo (cryptocurrencies). iimpawu ezinjalo ingekho enye umsebenzi, ngaphandle njengendlela sentlawulo, okanye amakhonkco kwezinye iiprojekthi.
kubudlelwane eluncedo, ezenza ukuba kufikelelwe isicelo okanye inkonzo.
kubudlelwane Asset iphathwa njenge-asethi kunye icandelo zemali ngokwenene xa befumana umvuzo ukubekwa zabo ngohlobo izahlulo okanye umdla emva ukufunyanwa kwabo. Kule meko, ayefana kwizabelo, bonds izithako.
Ngokusekelwe kule ngokuhlelwa, FINMA ugqala ICO ngolu hlobo lulandelayo:
Kwimeko yokuba umqondiso unalo umsebenzi njengendlela yokuhlawula, Iimfuno umlawuli kaThixo bancipha ukuthotyelwa kwemithetho lokuxhaphaza anti-mali. Cryptocurrency akuthathwa isibambiso.
iimpawu ezinjalo izibambiso azithathwa ngaphandle kokuba injongo yabo kuphela kukunika ukufikelela inkonzo okanye isicelo, kwaye ukuba lo umqondiso ingasetyenziswa ngale ndlela ukususela kwixesha wakhululwa. Kwelinye icala, ukuba ivezwa kukhona kuphela okanye inxalenye utyalo-mali, FINMA uya gqala izibambiso.
Ivezwa are izibambiso, nto leyo ethetha ukuba urhwebo lwabo kufuneka zithobele imimiselo yomthetho civil, kwakunye neemfuneko Securities uMthetho. Phakathi kwezinye izinto, oku kuthetha ukuba i-ICO kufuneka balandele imithetho ephathelene nokwenyusa, kunye nokunika ngokwaneleyo ulwazi kubatyali.
FINMA Uqaphela ubukho iifom ICO hybrid, umzekelo, ukuba izincomo eluncedo zingasetyenziswa njengendlela sentlawulo. Ngaxeshanye, ICOs kufuneka zithobele imithetho lokuxhaphaza anti-mali.
Amagama kunye nesiqulatho eshicilelwe ICO Guide yenza kucace ukuba FINMA unenkxalabo kakhulu malunga nokungqinelana ne-Anti-Money lokuxhaphaza Act. inkxalabo umlawuli kaThixo kulindelekile, njengoko xa besebenzisa iintlobo inkqubo block, ubungozi zemali. Kwimeko, ushishino ungaziwa kwaye ngaphandle kokusebenzisa nomlomo wezimali ovunyiweyo.
ingqalelo Regulator kaThixo lwaveza mthetho izibambiso, umzekelo, isibophelelo sokunikeza iinkcukacha ezithembekileyo kwaye ziyinyani, nto leyo ibaluleke kakhulu, ekubeni ivezwa zixhomekeke hexa ixabiso elikhulu.
IziKhokelo epapashwe waphinda ukuqinisekisile FINMA umdla isakhono kobuchwepheshe blockchain kunye imfuneko yendlela ecacileyo kodwa nelungeleleneyo yokulawula le sphere ezintsha. FINMA yinxalenye Group elisebenzayo blockchain kunye ICO, yasekwa nguRhulumente Secretariat for International Affairs Financial. Ekupheleni 2018, iqela ukusebenza kufuneka baqulunqe isikhokelo umsebenzi kunye indlela lowiso-mthetho kulo ICO kunye blockchain.
kwi Ripples 16%, zonke Amehlo Coinbase
Ixabiso yama- iye ...
Bacinga ukuba oko ...
Post Previous:Yintoni Ofana Okulandelayo ukuba Bitcoin Price?
Post Next:Inguquko entsha ye Bitcoin Core ixhasa ngokupheleleyo SegWit-iidilesi